भगवान बुद्धलाई किन पूजा गर्ने? | BodhiTv
भगवान बुद्धलाई किन पूजा गर्ने?
– ” हे कलामहरु, कुनै कुरालाई यसकारण नमान कि त्यो तिमीले सुनेको हो , तिमीले यस कारण नमान कि बाउ बाजेको परम्पराबाट चल्दै आएको हो , कुनै कुरालाई यसकारण नमान कि धर्मग्रन्थमा लेखिएकोछ। तिमीले यस कारण नमान कि त्यो न्याय शास्त्र अनुसार छ । कुनै कुरा यस कारण नमान कि माथिबाट हेर्दा त्यो मान्य प्रतीत लाग्छ , कुनै कुरालाई यस कारण नमान कि त्यो हाम्रो विश्वास या हाम्रो दृष्टीको अनुकूल लाग्छ । कुनै कुरा यसकारण नमान कि त्यो कुन आदरणीय आचार्य द्वारा भनिएको हो कालामहरु ;- अनि हामीले केगर्नुपर्छ ? बुद्ध ;- …..कलामहरु , कशी यही हो कि स्वयं आफूसित प्रश्न गर कि के यो कुरा स्विकार गर्नु हितकर छ ? के यो कुरा गर्नु निन्दनीय छ ? के यो कुरा बुद्धिमानहरुबाट निषिद्ध हो , के यस कुराले कष्ट अथवा दुःख ; हुन्छ कालामहरु, यति नै तिमीलाई यो पनि हेर्नुपर्छ कि के यो मत तृष्णा, घृणा ,मूढता ,र द्वेषको भावनाको वृद्धिमा सहायक त होइन , कालामहरु, यो पनि हेर्नुपर्छ कि कुनै मत -विशेष कसैलाई उन्को आफ्नो इन्द्रियहरुको गुलाम त बनाउँदैन, त्यसलाई हिंसामा प्रवृत्त त गर्दैन , त्यसलाई चोरी गर्न प्रेरित त गर्दैन , अन्तमा तिमीले यो हेर्नुपर्छ कि यो दुःख;को लागि या अहितको लागि छैन यि सबै कुराहरुलाई आफ्नो बुद्धिले जाँच हेर, र तिमीलाई स्विकार गर्न लायक छभने मात्रै नै यसलाई अपनाउनु ।